Amapolisa AseSri Lanka NeeMonki ZamaBhuda Ezinenzondelelo Ebaxiweyo Ajongene Neenkundla
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiBhulu IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
AGASTI 21, 2015
Abasemagunyeni ESri Lanka Bazama Ukukhusela Inkululeko Yonqulo
Iinkundla eziphakamileyo zaseSri Lanka ziye zavuma ukuphinda zijonge izimangalo zogonyamelo ezenziwa ngabachasene nonqulo lwamaNgqina kaYehova. Ukususela ngo-2013, amaNgqina aye anyamezela iziganeko ezandayo zokubethwa ligquba nokuthukwa eziye ziqalwe ziimonki zamaBhuda. Ukonzakaliswa kwabantu nokungamkelwa kwezinye iinqulo kubangelwa kukuba amapolisa engawakhuseli amaNgqina namanye amaqela onqulo amancinci yaye kwenza abo banenzondelelo ebaxiweyo ngonqulo baqhubeke besenza oku.
Iziganeko Ezikhokelela Ekuveleni Phambi Kwenkundla Ephakamileyo
NgoMatshi 1, 2014, eTalawa (Kumntla-Mbindi wePhondo), amabhinqa amabini angamaNgqina kaYehova ayethetha nabanye ngeenkolelo zawo—isenzo esisemthethweni eSri Lanka. Iimonki ezimbini namapolisa amabini awatyhola ngokunyanzela abantu ukuba bangene kwicawa yawo. Abanjwa aza asiwa kwisikhululo samapolisa, apho athukwa ngamapolisa naziimonki kangangeeyure. Amapolisa awazange awabek’ ityala la mabhinqa sekunjalo, awagcina eluvalelweni ubusuku bonke.
Kwesinye isiganeko esenzeka ngo-Oktobha 29, 2014, eWalasmulla (KuMzantsi wePhondo), amapolisa abamba amabhinqa amane (asemfanekisweni) aza awavalela ubusuku bonke nezaphuli mthetho ezigwetyiweyo. Nangona engazange onzakaliswe emzimbeni, athukwa kangangeeyure eziliqela ebudeni bobunzima.
Kuwo omabini la matyala, amaNgqina amangalela amapolisa afaka nesicelo samalungelo asiseko kwiNkundla Ephakamileyo eSri Lanka. Le Nkundla iye yabona ubungqina obubambekayo yaye ivumile ukuchophela lamatyala. Amabhinqa awayebanjwe eTalawa athi: “Siyavuya iNkundla Ephakamileyo iye yavuma ukulichophela eli tyala. Iye yavuselela ithemba lethu kwezobulungisa eSri Lanka.” Ngaphambi kokuba kuchotshelwe ityala ngoMeyi 29, 2015, iJaji uSisira de Abrew, yathi, amaNgqina ngabantu abanobubele kakhulu kwaye iincwadi zawo zonqulo awazihambisayo azibugxeki ubuBhuda. Omabini la matyala aza kuxoxwa ekupheleni konyaka.
Inkundla Yezibheno Iza Kuhlola Ukungasebenzi Kakuhle Kwamapolisa
EColombo, kwisixeko esilikomkhulu, amaNgqina kaYehova abhena kwiNkundla yeziBheno mayelana neziganeko eziyi-11 zokungasebenzi kakuhle kwamapolisa. Kwesinye isiganeko, imonki yabetha ngokumasikizi uNiroshan Silva yaza yamrhuqela kwisikhululo samapolisa ukuze immangalele. Kodwa ke, endaweni yokuba amapolisa amkhusele uMnu. Silva, ambetha.
UMnu. Silva wathi, “Asiceli ukuphathwa ngendlela ekhethekileyo eSri Lanka, sifuna nje kwenziwe ubulungisa kuxhaswe amalungelo asisiseko okuba abantu bonke babenenkululeko yonqulo.” Inkundla iye yavuma ukuchophela eli tyala.
Inkqubela Yakutsha Nje
ISri Lanka iye yavuma ukuba ingxaki yokungazamkeli iinkolelo zabanye ikhona kwaye ithembise ukwenza amalungiselelo okukhusela inkululeko yonqulo. AmaNgqina kaYehova akubona oku njengenkqubela.
UMnu. J. C. Weliamuna, igqwetha eliphezulu lamalungelo asisiseko elimela amaNgqina wathi: “Bekusoloko kukho iinqulo ezininzi eSri Lanka kangangamashumi eminyaka, yaye zonke ezi nqulo bezihleli kunye ngoxolo de kubekutsha nje. Abanye baye baluduba olu xolo ngezenzo zogonyamelo nokoyikisa amaNgqina kaYehova namanye amaqela onqulo amancinci, enyhasha amalungelo asemthethweni amaNgqina. Abasemagunyeni abafanele baxhase izityholo ezingenasihlahla kodwa bafanele baphande.”
AmaNgqina anethemba lokuba iinkundla ziza kuwakhusela amalungelo awo asisiseko okunqula ngoxolo. Ngoku alindele kurhulumente, aqinisekise ukuba kwenziwa izinto ngokomthetho kwaye kugcinwa amalungelo enkululeko akumgaqo-siseko.
Amapolisa Akhusela AmaNgqina KaYehova Kwindibano Yawo Enkulu
Xa amaNgqina kaYehova afaka isicelo sokubamba indibano yawo yengingqi ngoAgasti 2014 eColombo, ikomkhulu laseSri Lanka, amapolisa ayengafuni ukuvuma ukuba abenendibano enkulu ngolo hlobo. Ayexhalabele inkuseleko yabo ngenxa yokuba iimonki zazikhe zaphazamisa iintlanganiso zonqulo zamaNgqina kaYehova zaza zamosha iindawo anqulela kuzo.
Sekunjalo, amapolisa avuma ukuba ibekho yaye amapolisa ayi-70 ayezulazula kwiSugathadasa Outdoor Stadium ejonge ukhuseleko nakubeni imozulu yayingekho ntle. Abayi-6 376 ababekho balunandipha ucwangciso ngaphandle kweziphazamiso. Abanye abayi-2 692 ababeseJaffna, nabo balunandipha ucwangciso ngaphandle kweziphazamiso, xa bebonke ababekho babeyi-9 068. AmaNgqina kaYehova ajonge phambili kwiindibano zawo zengingqi kwihlobo lika-2015 ngempumelelo efanayo.